Myanmar Idol ကို သတိပေးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ရေမွန် - သတင်းရွာ
Myanmar Idol ကို သတိပေးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ရေမွန်
ရေမွန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကြားမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များနေတဲ့ Idiots အဖွဲ့ရဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သီချင်းတွေကို ရေးစပ်သီဆိုလေ့ရှိပြီး တစ်ပုဒ်ဆိုတစ်ပုဒ် ပရိသတ်တွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားလောက်အောင် ဂီတမှာ ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဝန်းရံအားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိနေတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ရေမွန်ဟာလက်ရှိမှာ သီချင်းပေါင်းများစွာ ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး “ငါသေလို့ရတယ်” “ချန်ခဲ့” “ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူ” “မင်းနဲ့နီးဖို့” “တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်” စတဲ့သီချင်းတွေဟာအချိန်တွေဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း ပရိသတ်ကြားမှာ မရိုးနိုင်တဲ့သီချင်းတွေအဖြစ်ကျန်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Tuborg beer ရဲ့ brand ambassador အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော ပရိသတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့ TV Program တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Myamar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Rock တေးသီချင်းတွေနဲ့သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ week မှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် Yaw Key က ရေမွန်ရဲ့ သီချင်းဖြစ်တဲ့ ” ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူ ” သီချင်းနဲ့သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီသီချင်းအတွက် ဒိုင်တွေ ပေးတဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ” ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူ “သီချင်းက Low (Bass) ကိုအသားပေးဆိုရတဲ့သီချင်းပါ ။ Bass အသံကိုပေါ်လွှင်အောင်မဆိုတတ်လို့ သီချင်းနဲ့လိုက်ဖက်မှုမရှိတိုင်း သီချင်းကိုချည်း (အဆင့်အတန်းမမှီသလို) အပြစ်ပုံချလို့ မရပါဘူး ကိုယ့်ဆရာတို့ ။ MMID Fan တစ်ယောက်မဟုတ်သလို ဘယ်ပြိုင်ပွဲမှလည်းမကြည့်ဖြစ်ပါဘူး ( အဆိုတော်တွေကို စက်နဲ့ Season အလိုက်ရိုက်ထုတ်နေတယ်လို့ခံစားရလို့ပါ ) ။ အခုကျွန်တော့်သီချင်းနဲ့ပြိုင်တယ်ဆိုလို့တချက် ဝင်လေ့ကြည့်တာပါ ။ YAW KEY ရေညီလေး Bravo ပါ ။ ပြိုင်ပွဲမှာဆုရဖို့ထက် တကယ့်လက်တွေ့ မှာဆုရဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ် ။ Vocal အ Fine ကြီးပဲ ။ ကြိုးစားထား ” ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ သတိပေးစကားရေးသားပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးထားပါတယ် ။
ရေမွန်ရဲ့ ပရိသတ်အချို့ကလည်း ” အခြားသူ သီချင်းကို ပြန်ဆိုတယ် ဆိုတာ သီချင်းပိုင်ရှင် ကို respect ရှိရမယ်. မူရင်း သီချင်းကို အပြစ်ပြောတယ်ဆိုတာ pro မပီသလို့ဘဲ ထင်တယ်. We r idiots. I love this band so much ” ဆိုပြီးမှတ်ချက်တွေရေးသားထားကြတာတွေ့ရပါတယ် ။ ပြိုင်ပွဲဝင်ထက် သီချင်းကိုအပြစ်ပြောဝေဖန်ခဲ့တဲ့အတွက် သီချင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ရေမွန်က ပေါက်ကွဲခဲ့ဟန်တူပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
ရမှေနျဟာ မွနျမာနိုငျငံကလူငယျတှကွေားမှာ အောငျမွငျကြျောကွားလူကွိုကျမြားနတေဲ့ Idiots အဖှဲ့ရဲ့အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူဟာကိုယျတိုငျကိုယျကြ သီခငျြးတှကေို ရေးစပျသီဆိုလရှေိ့ပွီး တဈပုဒျဆိုတဈပုဒျ ပရိသတျတှရေဲ့ပါးစပျဖြားမှာရပေနျးစားလောကျအောငျ ဂီတမှာ ထူးခြှနျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး ဝနျးရံအားပေးတဲ့ ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိနတေဲ့အနုပညာရှငျတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။
ရမှေနျဟာလကျရှိမှာ သီခငျြးပေါငျးမြားစှာ ထှကျရှိထားတာဖွဈပွီး “ငါသလေို့ရတယျ” “ခနျြခဲ့” “ဝမျးနညျးတတျတဲ့ခဈြသူ” “မငျးနဲ့နီးဖို့” “တှရေ့တာဝမျးသာတယျ” စတဲ့သီခငျြးတှဟောအခြိနျတှဘေယျလောကျပွောငျးပွောငျး ပရိသတျကွားမှာ မရိုးနိုငျတဲ့သီခငျြးတှအေဖွဈကနျြရှိနတောဖွဈပါတယျ။လကျရှိမှာ Tuborg beer ရဲ့ brand ambassador အဖွဈဆောငျရှကျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
လတျတလော ပရိသတျတှကွေားမှာရပေနျးစားနတေဲ့ TV Program တဈခုဖွဈတဲ့ Myamar Idol သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီးရဲ့ Rock တေးသီခငျြးတှနေဲ့သီဆိုယှဉျပွိုငျရတဲ့ week မှာတော့ ပွိုငျပှဲဝငျ Yaw Key က ရမှေနျရဲ့ သီခငျြးဖွဈတဲ့ ” ဝမျးနညျးတတျတဲ့ခဈြသူ ” သီခငျြးနဲ့သီဆိုယှဉျပွိုငျခဲ့ပါတယျ ။ ဒီသီခငျြးအတှကျ ဒိုငျတှေ ပေးတဲ့မှတျခကျြနဲ့ပတျသတျပွီး ” ဝမျးနညျးတတျတဲ့ခဈြသူ “သီခငျြးက Low (Bass) ကိုအသားပေးဆိုရတဲ့သီခငျြးပါ ။ Bass အသံကိုပျေါလှငျအောငျမဆိုတတျလို့ သီခငျြးနဲ့လိုကျဖကျမှုမရှိတိုငျး သီခငျြးကိုခညျြး (အဆငျ့အတနျးမမှီသလို) အပွဈပုံခလြို့ မရပါဘူး ကိုယျ့ဆရာတို့ ။ MMID Fan တဈယောကျမဟုတျသလို ဘယျပွိုငျပှဲမှလညျးမကွညျ့ဖွဈပါဘူး ( အဆိုတျောတှကေို စကျနဲ့ Season အလိုကျရိုကျထုတျနတေယျလို့ခံစားရလို့ပါ ) ။ အခုကြှနျတေျာ့သီခငျြးနဲ့ပွိုငျတယျဆိုလို့တခကျြ ဝငျလကွေ့ညျ့တာပါ ။ YAW KEY ရညေီလေး Bravo ပါ ။ ပွိုငျပှဲမှာဆုရဖို့ထကျ တကယျ့လကျတှေ့ မှာဆုရဖို့ကပိုအရေးကွီးပါတယျ ။ Vocal အ Fine ကွီးပဲ ။ ကွိုးစားထား ” ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ သတိပေးစကားရေးသားပွီး လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျကနေ ပရိသတျတှကေိုမြှဝပေေးထားပါတယျ ။
ရမှေနျရဲ့ ပရိသတျအခြို့ကလညျး ” အခွားသူ သီခငျြးကို ပွနျဆိုတယျ ဆိုတာ သီခငျြးပိုငျရှငျ ကို respect ရှိရမယျ. မူရငျး သီခငျြးကို အပွဈပွောတယျဆိုတာ pro မပီသလို့ဘဲ ထငျတယျ. We r idiots. I love this band so much ” ဆိုပွီးမှတျခကျြတှရေေးသားထားကွတာတှရေ့ပါတယျ ။ ပွိုငျပှဲဝငျထကျ သီခငျြးကိုအပွဈပွောဝဖေနျခဲ့တဲ့အတှကျ သီခငျြးပိုငျရှငျဖွဈသူ ရမှေနျက ပေါကျကှဲခဲ့ဟနျတူပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ ..။